Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran iyo guulaha laga gaaray | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran iyo guulaha laga gaaray
Shirkii ka socday teendhada xerada ciidamada cirka ee Afisiyooni ayaa lasoo afmeeray iyadoo guulo laga gaaray.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirkii ka socday teendhada Afisiyooni ee qaatay afartii maalin ee u dambeysay ayaa lasoo afmeeray iyadoo maalinimada Khamiista ah loo qorsheeyay xafladda saxiixa heshiiska doorashooyinka islamarkaana lasoo saari doono war-murtiyeedka shirka qaatay muddada afarta maalin ah.
Keydmedia Online ayaa isku dayday in ay hesho macluumaad ku saabsan heshiiska, waxeyna KON ay ogaatay in inta badan heshiis laga gaaray qodobadii laga wada hadlay marka laga reebo arinta Gobolada Waqooyi, qodobkaasi oo noqday kii ugu adkaa maadaama dhinacyada isku haya aysan fadhin shirka, loona kala dab-qaadayay.
Macluumaadka ay heshay KON ayaa tilmaameysa in la isku raacay in lakala diro dhammaan guddiyadii doorashada lana soo magacaabo guddi cusub.
Sidoo kale murankii ka taagnaa gobolka Gedo ayaa la isla qaatay in Hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe uu soo magacaabo Guddoomiyaha degmada Garbarahey, guddiga doorashadana uu soo magacaabo madaxweyne Axmed Madoobe, amaankana ay sugaan ciidamada Booliska ee AMISOM.
Si loo dhammeystiro arinta Jubbaland, waxaa si gaar ah uga wada shaqayn doona guddiyo ay soo magacaabaan RW Rooble iyo Axmed Madoobe, arrintani ayaa waxay kamid ahayd soo jeedintii guddiga fasamada ee Baydhabo ku kulmay 16-kii Febaraayo.
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo, xubnaha Midowga Musharixiinta, Bulshada Rayadka, iyo siyaasiyiin xilal kasoo qabtay dalka ayaa lagu wadaa in ay ka soo qeyb galaan xiritaanka shirka oo maalinimada Khamiista ah ka dhici doona teendhada Afisiyooni.
Qodobka ugu adag ee uu muranku hareeyay waa arrinta Gobolada Waqooyi ee Somaliland waxaana lagu wadaa in maanta oo arbaco ah golahana uu ku jiro fasax in la dhammeystiro.
Qaar kamida xubnaha Midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa wada kulamo ay la qaadanayaan siyaasiyiinta isku haya arrimaha doorashooyinka ee kasoo jeeda gobollada waqooyi.
Shalay ayee aheyd markii Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq, uu ka sheegay shirkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay Talaadadda ka yeesheen xaaladaha Soomaaliya, in Dowladda Federaalka iyo Dowlad goboleedyadu heshiis ka gaareen murankii jiray.
Maxamed Cabdirisaaq, ayaa xusay in saddexdii arrin ee ugu cuslaa la xalliyay, taas oo gabagabo ka dhigeysa wadahadalladii u dhaxeeyay Dowladda iyo Dowladaha xubnaha ka ah oo bilawday 22-kii bishaan May.